एमसीसी, नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय हीत - Khabar Center
२०७९ जेठ ७ गते शनिवार
अहिले चर्चाको केन्द्रविन्दुमा रहेको एमसीसीबारे सामाजिक सञ्जाल लगायतका सोसल मिडियाहरूमा चर्को विवाद गर्ने क्रम रोकिएको छैन । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) के हो ? नेपालमा यसले कहिले प्रवेश गर्यो, यसले देशलाई नोक्सान गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । एमसीसी विरुद्ध कसैले नेपालका लागि यसले वेफाइदा पुर्यायाउँछ त कसैले देशलाई फाइदा पुर्यायाउने काम गर्छ भन्ने दावी गरीरहेका छन् । त्यति मात्र होइन कतिपयले अमेरिकी सेना नै नेपाल भित्रिने र शासन समेत उसैको चल्ने हौवा समेत फिंजाईरहेका छन् । भने कतिपयले त्यस्ता भ्रमका पछि नलाग्न सचेत गराईराखेका छन् । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर के हो त एमसीसी भन्ने बारे केही चिरफार गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
वास्तवममा एमसीसी अमेरिकाको सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभबाट पास गरेर विभिन्न देशको लागि सहयोगको निम्ति तयार पारिएको प्रोजेक्ट हो । यसलाई आर्थिक विकास मार्फत गरिवी न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यका रूपमा लिइएको छ ।
नेपालबाट मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सहायता सम्झौतामा तत्कालिन काङ्ग्रेस सरकारका अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते नेपालका तर्फबाट यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही अनुसार २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा सचिवालय दर्ता भएको थियो जसमा अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडा प्रस्तावका रूपमा थिए । उक्त सम्झौता नेपालको आर्थिक विकास र गरिवी निवारण प्रवद्र्धन गर्ने साझा लक्ष्य प्रति एमसीसीको सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनताका गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिवद्धतालाई सहयोग पुयाउने ढंगले सरकारले एमसीसीको सहायताको उपयोगका सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गरेको ज्ञात नै छ । अर्को कुरा सम्झौता अनुसार विद्युत प्रसारण आयोजना निर्माण प्रकृयामा पुर्व सर्त पूरा भएपछि कार्यान्वयमा लैजाने र जसको कार्य अवधि ५ वर्ष सम्म रहने व्यवस्था पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी सरकारबाट एमसीसी परियोजना मार्फत नेपाल सरकारले सहयोग अनुदान पाउने गरी भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ । जसलाई कतिपय राजनीतिककर्ताहरूले यो सम्झौता अमेरिकी सैनिक गठनबन्धनसँग जोडिएकाले नेपालको भविष्यमाथि खतरा भनेर औल्याएका थिए भने कतिपय विश्लेषकहरूले भने नेपालको विकास प्रकृयामा साझेदारको रूपमा रहेकाले यो एउटा अनुदान वा विकास रहेको कुरा टिप्पणी गरे त्यस कारण हामी आम नागरिकहरूले यसलाई एउटा साझेदारी निकाय अर्थात एउटा अनुदानका रूपमा लिन जरुरी छ ।
एमसीसी आउनु र ल्याउनुमा एकाध झिनामसिना दलहरूले काँग्रेसलाई एक्लो दोषी करार गरिरहेका छन् । तर वास्कविकता यो भन्दा फरक छ । किनकी काङ्ग्रेस एक्लैले चाहँदैमा यो पास हुनेवाला थिएन । जहाँ काङ्ग्रेसले नेतृत्व प्रदानमात्र गरेको हो । सम्झौता पास हुनका लागि काङ्ग्रेस बाहेक अरु ५ दलीय गठबन्धनको समर्थन अनिवार्य थियो । तर दोषजति काङ्ग्रेसको टाउकोमा थोपरियो । एमसीसी नेपालको विकासको निम्ति अनिवार्य सम्झौता थियो किनकी नेपालको गरिवी अन्त्य गर्नका लागि यसले सहयोग पु¥याउँछ । काँग्रेस देश विकास गर्ने र विकासप्रेमी पार्टी हो । देश र जनताको उन्नती र प्रगतिको लागि काङ्ग्रेसले यो निर्णय गरेको हो । त्यसैले एमसीसीलाई हामीले अन्यथा लिनु जरुरी छैन । राजनीतिक गठजोडका कारण अहिले मुलुक अप्ठेरो अवस्थामा छ । हरेक अप्ठ्याराहरूसँग जुध्दै काँग्रेसले आजका दिनसम्म राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै आइरहेको छ । अरु झैं यो पार्टी पनि अहिले चुनावको संघारमा उभिएको छ । पार्टी भनेको सक्षम, सशक्त र दुरदर्शी हुनुपर्छ जसले देश र जनतालाई इमान्दारीतापूर्वक नेतृत्व दिन सकोस् । संविधान निर्माण भए पश्चात मुलुक राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्तिको दिशामा गयो तरपनि संविधान निर्माण पछि पनि मुलुकमा संकटकै अवस्थामा रह्यो । यस्तो अवस्थामा समेत राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्थापना गर्ने सिङ्गो आन्दोलनको पर्याय नेपाली काङ्ग्रेस बनिरहेकै छ ।
वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रियता लोकतन्त्र समाजवादको आदेश एवम् सिद्धान्त अनुरूप बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट नेपालमा न्यायपूर्ण गतिशील र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गर्दै सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य बोकेको नेपाली जनताको आगाध श्रद्धा र सम्मान पाएको यो नेपालको सबभन्दा पुरानो र प्रिय पार्टी हो । इतिहासको कालखण्डमा नेपाली काङ्ग्रेसले दर्ज गरेको जितको इतिहास लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास हो । प्रत्येक युगान्तकारी राजनैतिक आन्दोलनको सफल नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरेर नै देशमा परिवर्तन सम्भव भएको छ । नेपाली राजनीतिक सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनको संवाहक बनेको नेपाली काङ्ग्रेसले २००७ को जनक्रान्ति, २०१५को संसदीय जननिर्वाचन, २०२८ सालको झापा काण्ड, २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह, २०४६ सालको प्रजातन्त्रको स्थापना, २०६२÷०६३ जनआन्दोलन, २०६३ को वृहत शान्ति सम्झौता र २०७२ को संविधान जारी गर्न निर्णाय भूमिका खेलेको छ । नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा जेठो पार्टीको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर हँुँदा जहिले पनि लोकतन्त्र खतरामा रह्यो र त्यस विरुद्ध आन्दोलन गर्नु परेको इतिहास साक्षी छ । त्यस्तै गरी पार्टी स्थापनाको ७६ वर्षको यात्रामा काङ्ग्रेसले देश र जनताको लागि गरेका राजनीतिक सङ्घर्ष अनि यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरू पनि अनगिन्ती छन् ।
जननायक विपी कोइराला, मातृका प्रसाद, कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण सम्सेर जवरा, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, केदारमान व्यथित, सूर्य प्रसाद उपाध्याय, सुशील कोइराला, शेर बहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र अहिलेका युवा नेता गगन थापा जस्ता देश भक्त नेताहरूको कुशल नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस हुर्किएर यहाँसम्म आइपुगेको छ । त्यस्तै नेपालको जागरणमा महिलाहरूको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको छ । कुमारी, लक्ष्मीदेवी, श्रीमती मंगलदेवी सिंह, शैलेजा आचार्य लगायतका महिलाहरूले २००७ साल पहिलेबाटै नेपाल महिला संघको सुरुवात गरेका थिए । तसर्थ नजिकै आइरहेको स्थानीय चुनावलाई मध्यनजर गर्दै अब काङ्ग्रेस पार्टी कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा गहिरो ढंगले मनन गर्न आवश्यक छ । स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरी नेपाली काङ्ग्रेसले १ महिने अभियान “घर घर जाऔं, काङ्ग्रेस जिताऔं” भन्ने अभियान चलाएको छ । सरकारले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्ने घोषणा गरीसकेको छ त्यस कारण यो अभियानलाई काङ्ग्रेसले जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढाउनु जरुरी छ । यसै क्रममा एमसीसीका विषयमा काङ्ग्रेस सुरुदेखि नै स्पष्ट रहेको हुँदा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीको विषयमा छरिएका भ्रमलाई जनताको दिमागबाट हटाउनु सक्नुपर्छ । देशमा भएका हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, बलात्कार लगायत हर किसमको यौन दुव्र्यवहारको अन्त्य गराइनु पर्छ । अबको महत्वपूर्ण विषय भनेको हिजोका दिनका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै आम जनता, नेता र कार्यकर्ताको आकांक्षा सम्वोधन गरी इतिहास रच्ने मौका फेरी पनि आएको छ । यो नेपाली काङ्ग्रेसको लागि अन्तिम मौका हो । सबैलाई समेटेर सन्तुलित ढंगले मिलेर नयाँ कार्य समिति चयन गरी महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका युवाहरूलाई साथ र सहयोग लिदै देश विकासमा अग्रसर बनाउनु पर्दछ । अब आउने दिनमा नयाँ जोश, जाँगर, सोचविचार, योजना, दृष्टिकोण र नयाँ शैलीका साथ पार्टी रूपान्तरण गरेर इतिहास बनाउने राम्रो अवसर आएको छ ।
अबको नेतृत्व भनेको युवा वर्गसँग हुन्छ । युवासँग जोश, जाँगर र पुरानासँग अनुभव लिएर आगामी चुनावमा पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने त्यो निक्र्यौल गर्नुपर्छ । यो हाम्रा लागि नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली जनतालाई सेवा गर्ने अवसर हो । अब हिजोको व्यक्तिवादी चिन्तनबाट माथि उठेर योग्य र सक्षमलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । रूपान्तरण र परिवर्तनको नेतृत्व गर्नुपर्छ अवको काङ्ग्रेसलाई विकाश र समृद्धिको वाहक बनाएर देखाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा सहित सम्पूर्ण देशवासी नेपालीहरूमा नयाँ वर्ष २०७९ को पावन अवसरमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उन्नतीको शुभ–कामना व्यक्त गर्दछु ।
अन्त्यमा, स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरुबिच गठबन्धनको चर्चा चलेको मात्र होइन, महानगरपालिका र उप–महानगरपालिकामा गठबन्धनले भागबण्डा गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन किन र केका लागि भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन । नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बिच सैद्धान्तिक हिसावले निकै ठूलो अन्तर छ । तर यी दुई दलबिच के को आधारमा गठबन्धन हो, त्यो पुष्टि हुनसक्ने कुनै आधार छैन । तर पनि गठबन्धनको राग अलापिएकै छ । यस्तो गठबन्धनलाई अपवित्र गठबन्धन भन्दा फरक पर्दैन । यस्तो गठबन्धन दिगो पनि हुँदैन । त्यसैले चुनावपछिको सत्ता गठबन्धन बाहेकको गठबन्धन दिगो हुँदैन भन्ने तथ्यलाई हाम्रो नेतृत्वले आत्मसात् गरोस् !
प्रकाशित मिति :बैशाख ८ २०७९ बिहिवार - १०:२१:५२ बजे